sspont: March 2012
(၁) ။Online ပေါ်တက်ပါလို့ …………… Website ထဲဝင်လိုက်ရင် Policy ကာရံထားလို့ဘာမှကိုမမြင်………..Bamar Net ရဲ့ Connectionအခြေနေရယ်မကောင်း ……..စိတ်ညစ်ပါကြောင်း ။ (၂)။ ဒို့အကြောင်း……. နည်းပညာများတိုးတက်ပြီ….. ခေတ်ရဲ့ ICT Internet မှာ Download ဆွဲ………… အိပ်စောင့်ရမြဲ….။ (၃)။ကမ္ဘာကြီးကကျဉ်းလှတယ် ………… Net လောက်သူမကျယ်Internet ကအကျယ်ဆုံးထွက်ငွေတ၀ုန်းဝုန်း…….။ (၄)။ဟို(Net)ဆိုင်ကမီးထိန်ထိန်…….. ဒီ(Net)ဆိုင်ကမီးထိန်ထိန်တစ်နာရီ(၅၀၀)တောင်းပါတဲ့……..ရိုက်စားတို့အိမ်…….။ (၅)။ Internetဆိုင်ကား...........ပုံမှန်(သင်)သွားပါတနေ့တခြား…………….အကြွေးများလာမှာ………… ။ (၆)။ မောင်တို့မယ်တို့Net ဆိုင်ဝင်………… အပြုံးပန်းကိုဆင်Connection တော်တော်လေး………… ညီညီညာညာနှုတ်ဆက်ပြေး ………။ (၇)။ Internet ဆိုင်တွင်း…………… အများကစော်နဲ့ကြူနေသည်ကြို၍ဆုတောင်းနေကြပါ……….. Connection မပြုတ်ဖို့ဆုမတောင်းချင်ဘူးလားပြိုင်တူဆုတောင်းလျှင်ရနိုင်ပါသည်……။ (နောင်တ) (၈)။ မမ၀၀Online အထက် ……… Chating ထိုင်ကာChatChat သာ chat ပါ မမရာ ………ခဏခဏပုံမှန်လာ မကြာခင်(သူ)လင်ရ……….. မမ၀၀ပျော်၍က…….။ (၉)။ မြီးကောင်ပေါက်စအရွယ်မှာ ၊ Internet ဆိုင်ကိုလာChatting မှာထိုင်၍ပွား ၊ တူတူရေ၀ါး …….။ (၁၀)။ဘယ်သွားနေလဲ မောင်ရေခဲ……………….. Internet ဆိုင်ကိုသွားလို့ဆို ..။ ဘာသွားလုပ်လဲမောင်ရေခဲ ………………… ပညာသတင်းစုံလေ့လာကုန် …။ဲ ဘာသိခဲ့လဲမောင်ရေခဲ ………………… ခြင်ကိုက်လိုင်းစုတ် Connection ပြုတ် ။ ဘယ်လောက်ကုန်လဲမောင်ရေခဲ……………. တစ်နာရီ (၅၀၀)မတန်ပါ ။ (၁၁)။VZO ၊ Gtalk သုံးပါလို့ …………. အချစ်ရှာတဲ့ကညာပျို ကြည့်ကြပါဆို …………………… အမူယာပိုအော်ကာပြောတဲ့စကား ဘေးလူတွေအမြင်ကတ်တောင်မှ …………….. အရျက်မဲ့စွာသူပြန်ပြောတယ် နားပိတ်ကာထား …………….. ။ (၁၂)။Internet User လေးမောင်မှတ် …………………. အင်္ကျီထူထူဝတ်ထားသည် Dreambed ယူလာသည် ………… Download ဆွဲရန်သတ္တိလဲရှိသည် ။ (၁၃)။Zawgyi font ပျောက်နေသည် …………… စာရိုက်၍မရပါ Computer အရမ်းလေး ၊ Connection မပေါ့ပါး တော်တော်ဆိုးပါလား…….။ (၁၄)စာပို့သမားလေး G.mail ဟာ ……. စာပို့ရာတွင်အလွန်သေချာ ကိုသာဇံ Software သမား ………… Download လုပ်ဖို့သူကြိုးစား ရဲသားကြီးက Kaspersky ……….လူဆိုးဖမ်းရာတွင်တာဝန်ကျေသည် ကိုဖိုးမောင်နှခေါင်းသမား ………… Sexy site တွေသူလျှောက်သွား ဦးသာထူးက Hardware ဆရာ ………… နည်းပညာသစ်တွေသူလေ့လာ တို့ဆိုင်ရှင်မခင်မြ………….ငွေတောင်းရာတွင်ရက်စက်လှ ။ (၁၅)။ယနေ့လိုင်းကောင်းသည်…………Aircon မရှိ၍ပူသည် Fan လေးတော့ဖွင့်ပေးပါ ။ (၁၆)။ညအခါ NETဆိုင်လာ Download လုပ်မလား ၊ Chat မလား……။ Web.cam မပါ ၊ Earphone မလာ ……………. တကယ်မရှိတာလား ၊ ညစ်တာလား (၁၇)။တ၀ီဝီမြည်ရာ Net ဆိုင်မှာ ……..အနားမှာလာဝဲ ဘာကောင်လဲကွယ့်………. တ၀ီဝီမြည်ရာ Net ဆိုင်မှာ………. အနားမှာလာဝဲ ခြင်သံပဲကွယ့်…..။ တဂျုန်းဂျုန်းသံပေး Net ဆိုင်ဘေးက……… မရပ်မနားဘာသံလဲကွယ့်……… တဂျုန်းဂျုန်းသံပေး Net ဆိုင်ဘေးက……… မရပ်မနားမီးစက်သံကွယ့်………..။ တောက်ခေါကတဲ့သံတညံညံ…………………Net ဆိုင်ထဲကဘာဖြစ်တာလဲ…. တောက်ခေါကတဲ့သံတညံညံ…………………Conneection လေးဒေါသသံလေး……..။ ဝန်ခံချက်။ ။ ဤစာသည် မိမိရေးသောစာများ တစ်လုံးတပါတမှ မပါကြောင်း ဝန်ခံအပ်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ¤,¸.•*ခါးးးလေး♥★♥(မေဃဝတီ) ဧပြီလ 1, 2012 1:57amတွင်¤,¸.•*ခါးးးလေး♥★♥(မေဃဝတီ) မှတင်ပြသောဘလော့ပို့(စ်)ဖြစ်ပါသည် စာပို့မယ် View Blog ထိုလင့်တွင်အပြည့်အစုံဖတ်ပါ: http://www.mm-flashsongs.com/profiles/blogs/5202681:BlogPost:1097230#comments#ixzz1qlL2HymE
Posted by shwesin at 10:10 PM No comments:
အလှတရားကို ဖန်တီးပေးနိုင်သော ရာသီစာ ဖရဲသီး ဖရဲသီးဟာ နွေရာသီအတွက် ရာသီစာ သီးနှံတစ်မျိုးပါ။ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသားအနှစ်တွေကြောင့် ပူအိုက်တဲ့ နွေရာသီမှာ ရင်ကိုအေးမြစေပြီး ရေငတ်ပြေစေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက် အမျိုးသားရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့ ပန်းသေပန်းညှိုးတဲ့ရောဂါ တွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ကတော့ အလှတရားကို ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ သစ်သီးလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလှအပစွမ်းအင်
ဖရဲသီးဟာအရေပြားကို အစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ Moisturizer ဖြစ်တာကြောင့် အသားအရေ အေးမြပြီး ကြည်လင် လန်းဆန်းစေပါတယ်။ ဖရဲသီးမှာ အမိုင်နိုအက်စစ်ဓာတ် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Citrulline ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားမှာ ဒဏ်ရာဖြစ်တာကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေပြီး ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် သင့်အသားအရေကို နုပျိုစေပါတယ်။ ဖရဲသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဘီတာကယ်ရိုတင်းက နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေပျက်စီးတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် နွေရာသီမှာ နေလောင်တာကို ကာကွယ်ဖို့ ဖရဲသီးကို စားပေးရပါမယ်။ ဖရဲသီးရဲ့ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်ဘီနဲ့ ဗီတာမင်စီတွေက အရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေကို လျော့နည်းစေပြီး အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေပါတယ်။
ဖရဲသီးတိုနာပြုလုပ်နည်းများ (၁) ဖရဲသီးအရည် ထမင်းစားဇွန်း ၂-၃ ဇွန်း၊ ဘရန်ဒီဝီစကီ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ဆေးဖက်ဝင် သစ်ခေါက်ရည် ထမင်စားဇွန်း နှစ်ဇွန်း၊ ရေသန့်ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း၊ အားလုံးကို စုပေါင်းပြီးမွှေပါ။ မျက်နှာကို အရင်ဆုံးသန့်စင်ထားပါ။ အဲဒီနောက် ရလာတဲ့ ဖရဲသီးတိုနာကို ဂွမ်းစနဲ့ တို့ယူပြီး မျက်နှာပေါ် ညင်သာစွာ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ထားပြီး ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ (၂) ဖရဲသီး Toner ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို စုဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးဖက်ဝင်သစ်ခေါက်ရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ ရေသန့်အနည်းငယ်ရှိရုံနဲ့လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖရဲသီးစိတ်လေးတွေကို အစေ့မဖယ်ဘဲ မွှေစက်ထဲမှာ သစ်ခေါက်ရည်နဲ့ ရေရောပြီးမွှေပါ။ ဖရဲစေ့မှာ Omega-6 နဲ့ Omega-9 မရှိမဖြစ် အဆီဓာတ်တွေပါဝင်ပြီး အဲဒီအဆီဓာတ်တွေက အရေပြားရဲ့အတွင်းပိုင်းထိ အလွယ်တကူ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
(၃) သင့်မျက်နှာက အဆီပြန်တတ်ရင်တော့ ဖရဲသီးအရည်အနည်းငယ်၊ ဘရန်ဒီဝီစကီနဲ့ ရေ ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းစီ ထည့်မွှေပြီး မျက်နှာပေါ် သုတ်လိမ်းပေးပါ။ မျက်နှာပေါ်က အဆီတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ (၄) ဖရဲသီးအရည်တစ်မျိုးတည်းကို မျက်နှာပေါ် တိုက်ရိုက် သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ ဖရဲသီးအရည်ကို ဂွမ်းစနဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပြီး ခြောက်အောင် ခဏထားပါ။ ပြီးနောက် မျက်နှာသစ်ပါ။
(၅) ဖရဲသီးအရည်ကို သံပရာရည် အနည်းငယ်နဲ့ရောပြီးလည်း မျက်နှာပေါ် ဂွမ်းစ အသုံးပြုကာ သုတ်လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ခဏထားပြီး ခြောက်သွားပါက သင်လက်ခံနိုင်ရုံ ရေနွေးနွေးနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။ (၆) ဖရဲသီးအတွင်းသားကို ကြိတ်ခြေပြီးရလာတဲ့ အဖတ်တွေကို သင့်မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းတစ်လျှောက် ကပ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီး မျက်နှာသန့်စင်ပေးပါ။ သင့်အသားအရေကို အေးမြစေကာ၊ ကြည်လင်သန့်ရှင်းစေပြီး အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်။
(၇) သင့်မျက်နှာမှာ နေလောင်ဒဏ်ရာတွေပါ ရှိနေရင်တော့ ဖရဲသီးအတွင်းသားနဲ့ သခွားသီးအတွင်းသားတွေကိုဆတူရောပြီး ကြိတ်ခြေပါ။ ရလာတဲ့ အရောအနှောအဖတ်တွေကို မျက်နှာပေါ်သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပါ။ အဲဒီနောက် ရေနဲ့သန့်စင် ဆေးကြောပါ။ နေလောင်ဒဏ်ရာတွေကို သက်သာစေပြီး အသားအရေ ဖြူဝင်းလှပစေပါတယ်။ ဖုန်တွေနဲ့ မျက်နှာကထွက်တဲ့ အဆီတွေရောပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်တာကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၈) နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့ ဖရဲသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊သဘောင်္သီးနဲ့ကုံကုမံရွက်တွေကု ရောနှောပြီး ရလာတဲ့အရောအနှော အဖတ်တွေကို လိမ်းပေးပါ။ အဲဒီနောက် မျက်နှာပေါ်ကို ပျားရည်သုတ်လိမ်းပြီး နာရီဝက်ကြာတဲ့အခါ မျက်နှာသန့်စင်ပေးပါ။ သန့်စင်ထားတဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ဂျုံမှုန့်ကို စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန် နှိပ်နယ်ပြီး သုတ်လိမ်းပေးပါ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ သင်္ကြန်လဲ နီးပီးလေ အဟဲ အသားအရည်လေးတွေလဲ ပျက်စီးလာရောပေါ့ဒီဒီဆေးနည်းလေး ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Good Health ဂျာနယ်မှာ အလင်း(ဆေးဝါး)ရေးထားတာတွေ့လို့သူငယ်ချင်းတို့အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံး အလှတရားကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေနော် credit By မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာ
Posted by shwesin at 10:56 PM No comments:
Color ဆန်းတွေနဲ. သင်္ကြန်မှာ လန်းကြရအောင် !!! By Nobody Jeans Myanmar (Albums)
Color ဆန်းတွေနဲ. သင်္ကြန်မှာ လန်းကြရအောင် !!! u
colour pant တွေကြည့်ချင်တဲ့ညီမငယ်များအတွက်ပါ Product ID : 211342112320 Cutting : Slim Fit Price : 1,220 Baht Color : Pink Color
Product ID : 211342113320 Cutting : Slim Fit Price : 1,220 Baht Color : Yellow Color (Back)
Product ID : 211342112720 Cutting : Slim Fit Price : 1,220 Baht Color : Red Color
Product ID : 211342114320 Cutting : Slim Fit Price : 1,220 Baht Color : Blue ဒီအရောင်လေးလှတယ်
Product ID : 212112119706 Cutting : Slim Fit Price : 1,250 Baht Color : Grey
Product ID : 112142114711 Cutting : Skinny Price : 1,200 Baht Color : Blue
Product ID : 112142111211 Cutting : Skinny Price : 1,200 Baht Color : Off White (Back) direct link by http://www.facebook.com/media/set/?set=a.326065360773826.71445.129814447065586&type=1
Posted by shwesin at 10:44 PM No comments:
Product ID : 212151651107 Category : T Shirt Color : White Price : 560 Baht
Product ID : 212151651507 Category : T Shirt Color : Grey Price : 560 Baht
Product ID : 212151651506 Category : T Shirt Color : Grey Price : 570 Baht
Product ID : 212151651906 Category : T Shirt Color : Black Price : 570 Baht
Product ID : 212353189904 Category : Blouse Color : Light Blue Price : 1,250 Baht 1baht@37kyat ထိုလင့်တွင်အပြည့်အစုံဖတ်ပါ: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.334872326559796.73145.129814447065586&type=1
Posted by shwesin at 10:13 PM No comments:
မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်အမူအရာအတိုင်းပေါ်သလို ကိုယ်ပြုသမျှ ကိုယ့်မှာပေါ်လိမ့်မည် (စူဠကမ္မ၀ိဘင်္ဂသုတ်မှ အနှစ်ချုပ်) ၁။ သူများအသက်၊ သတ်သည့်တွက်၊ အသက်ကိုယ့်မှာတို။
၂။ မသတ်ရှောင်ရှား၊ ထိုသူများ၊ ရှည်လျှားအသက်ကို။ ၃။ နှိပ်စက်ကလူ၊ ညှဉ်းဆဲသူ၊ ပြောထူရောဂါဆို။ ၄။ သနားစိတ်သွင်း၊ မနှိမ်နင်း၊ ကင်းရှင်းရောဂါကို။ ၅။ ထန်ပြင်းဒေါသ၊ ကြီးတတ်က၊ အလှပျက်မည်ဆို။ ၆။ ဒေါသကင်းစင်၊ မေတ္တာယှဉ်၊ ကြည်လင်လှသကို။ ၇။ မနာလိုပြန်၊ ဣဿာထန်၊ ခြံရံကင်းမည်ဆို။ ၈။ ဣဿာမထား၊ ၀မ်းမြောက်ငြား၊ ပေါများခြံရံကို။ ၉။ မလှူမဒါန်း၊ မပေးကမ်း၊ ခြောက်ခန်းဥစ္စာဆို။ ၁၀။ စွန့်ကြဲလေတုံ၊ ပြုပါကုန်၊ ကုံလုံကြွယ်ဝလို။ ၁၁။ မာန်မာနကြွယ်၊ ထိုသူဝယ်၊ မျိုးနွယ်ညံ့မည်ဆို။ ၁၂။ ထိုက်သူရိုကျိုး၊ မာန်ကိုချိုး၊ အမျိုးမြတ်သကို။ ၁၃။ သိဖွယ်ဟူသမျှ၊ မမေးက၊ ဖျင်းအ ပညာဆို။ ၁၄။ ကြားမြင်များအောင်၊ မေးလေ့ဆောင်၊ ခုနောင်တတ်သိလို။ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ ရတနာ့ဂုဏ်ရည်မှ)
Posted by shwesin at 9:12 PM No comments:
ခုတလောစပ်မိစပ်ရာရေးမိရေးရာရေးလိုက်ပါရဲ့ သူများဆီကချည်းကူးနေလို့မျက်နှာပူလို့ရေးချင်တာချရေးလိုက်မယ်နော်။သည်းခံဖတ်ပါကုန်။:D ခုတေလောဝင်ထားတဲ့ဆိုဒ်တွေထဲလဲပိုစ့်တွေတင်ဖြစ်ပါရဲ့ များသောအားဖြင့်အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့။ ကိုယ့်ဘာကိုယ်မိတ်ကပ်အကြောင်းတင်တာသနပ်ခါးအကြောင်းမတင်လို့ဆိုအပြောခံရသေးသဗျ။ အားပေးသွားကြတာလဲရှိပါတယ်(ဟီး၃ယောက်လောက်) ပန်းပုံတင်ပြန်တော့လဲမြန်မာပန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။(တို့ဘိုလုပ်ရမလဲ)။ ကျန်းမာရေးပိုစ့်တွေကျတော့လဲဒီအတိုင်းဆိုပျင်းမှာစိုးလို့ပုံလေးတွေထည့်ရတယ်။ပုံထည့်တာမကြိုက်တဲ့။ ကိုယ့်မှာတော့ရှာလိုက်ရတာပုံတွေဆိုတာမူးလို့။အဲ့လိုတွေအဆီအငေါ်မတည့်တာပြောပါတယ်။ မေလ်းပို့ပြီးအားပေးကြသူများလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကပြောပါရစေ။(အဟမ်းအထင်ကြီးအောင်ပို့တဲ့သူက၅ယောက်မပြည့်ဘူး) အိမ်မှာလဲလုပ်မိလုပ်ရာချက်မိချက်ရာကတော့ငါးခူဟင်းနဲ့ဒန့်ဒလွန်သီးပါအားပေးကြပါဦး
အချိုပွဲကလဲ၂ယောက်လုံးအားပေးပြီးမှကျန်တာရိုက်ထားတာစိတ်မဆိုးကြနဲ့နော်စားသွားကြပါဦး ခုရက်ပိုင်းတွေနေချင်သလိုနေနေပေမယ့်နက်ဖြန်လကုန်ပြီခွင့်ကလဲယူတော့မှာဆိုတော့ပိုစ့်တော့ဆက်မတင်ဖြစ်လောက်တော့ဘူး ဒီလတလလုံးနီးပါးပြန်မှာဆိုတော့မျက်စေ့နောက်သက်သာကြမှာပါ။ကိုယ်တိုင်လဲမျက်စိအပျက်သက်သာမှာပေါ့။wifiရတဲ့နေရာဆိုရင် တော့တင်ဖြစ်မယ်ပုံတွေကတော့I-padနဲ့သုံးရမှာဆိုတော့သိပ်မလုပ်တတ်ဘူး။ ဟိုနေ့ကလဲရုံးတခုကိုငွေသွားကောက်တာအဲ့ဘွားတော်ကသူပဲချိန်းပြီးစောင့်လိုက်ရတာလေ။ မျှော်သာမှော်ပေါ်မလာဇာတ်ခင်းသွားရော။အဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေသူအားတခွန်းမှလှည့်၍ပင်မမေးသောထိုရုံးအားလဲအံ့ သြပါသည်.ဆက်ဆံရေးကောင်းပုံ။မစောင့်နိုင်သည့်အဆုံးနီးစပ်ရာကိုသွားမေးပြီးပြန်လာပါ့မည်လာမည်အကြောင်းကိစ္စကိုလဲပြောခဲ့သည်။ တခြားနေရာသွားတာ၁၅မိနစ်လောက်ပဲကြာပြီးပြန်လာတော့အပြင်ပြန်သွားပြီတဲ့။hand overမလွှဲခဲ့။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းမှကောင်း။၃လပိုင်းဖြစ်တာမို့လို့ရသမျှလိုချင်လို့လာခဲ့သည်။မရတော့လဲဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်သူတွေအချင်းချင်းလဲအပေးအယူမျှမှပြီးတာပဲနော်.အဲ့တယောက်မတိုင်ခင်ရှေ့တယောက်တုန်းကတော်တော်အ ဆင်ပြေတယ်။ဒီနေ့ကသောကြာဆိုတော့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ရဦးမယ် ဒီမနက်အလုပ်လာရင်းဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ဆိုတော့အိမ်ကကိုယ်တော်ကိုအလုပ်ပြောင်းခိုင်းတာကိုလဲအင်တင်တင်။ အားမရဘူး။အေးပေါ့လေသူလဲသွားချင်မှသွားမှာပေါ့။ကိုယ်ကလဲအလုပ်ကအရင်လိုမပျော်တော့ဒီတော့စိတ်ပျော်အောင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်နေ။ အဲ့ဒါနဲ့အလုပ်မှာtime cardရိုက်ရင်းရုံးခန်းကိုအလာလမ်းမှာတရုတ်စကားတွေအရမ်းပွင့်နေတာလှလို့ရိုက်ခဲ့တယ်။ အပင်အောက်ကဓါတ်ပုံရိုက်ရင်းဟိုသီချင်းတောင်သွားသတိရသေး။" ဒီအရိပ်အောက်မှာအတူတူနေမယ်အမြဲရည်မှန်းထားခဲ့တယ်" (ဘယ်အရိပ်လဲတော့မသိ :P)
ခရေပန်းတွေလဲအများကြီးပဲစကတ်ကိုမပြီးအပင်ပေါ်တက်ရိုက်ရမှာမို့လို့ဒါတော့မရိုက်တော့ဘူးနော်:P ပန်းလေးတွေလဲကောင်းတယ်လှလဲလှမွှေးလဲမွှေးအဲဒါပေမယ့်ကြွေလဲကြွေတယ်နော်။ လူတွေကတော့စိတ်ဓါတ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့တွေးရင်လမ်းလျှောက်လာရင်းရုံးခန်းထဲရောက်လာလို့အလုပ်လုပ်မယ်တွေးရင်းဒီပိုစ့်တခုတော့ တင်လိုက်ပါတယ်။ see u again Now i do working.Really
Posted by shwesin at 8:11 PM No comments:
My freedomက candy ရဲ့ပို့စ်ကိုကြိုက်လို့ပြန်ရှယ်ထားတာပါ။ သူပြောတာလဲမှန်တယ်ထင်လို့ပါ။မကြိုက်ပဲနဲ့အီရင်မိန်းခလေးရောယောက်ကျားလေးပါသိက္ခာကျပါတယ်။ ဒါကိုတချို့ကဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိပါ။လူတကိုယ်အကြိုက်တမျိုးကိုး အိုကေ.. ဒီနေ့ပြောမှာက လူငယ်တွေကြားမှာ အလွန့်အလွန်မှ ရေပန်းစားလှတဲ့ အီစီကလီ (ခေါ်) ကျူခြင်း (ခေါ်) စမာခြင်း။ အားလုံးကတော့ ထင်မှာပဲ။ ကန်ဒီတယောက် ဒီအကြောင်းရေးမယ်ဆိုတော့ သူတော်တော်နားလည်လို့ဖြစ်မယ်လို့။ ဟဟဟ.. တကယ်တော့ အဲလောက်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စမာတယ်ဆိုတဲ့စကားတောင်ဟိုတလောကမှသူငယ်ချင်းတယောက် ပြောပြောနေလို့ ကြားဖူးတာ။ မြန်မာဗန်းစကားတွေကလည်း များသား။ တခါကလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာ "သူက ပွမ်တယ်.." တဲ့။ ကန်ဒီနားလည်တဲ့ ပွမ်တယ်ဆိုတာက နားညည်းတယ်.. နားပူနားဆာလုပ်တယ်.. ပွစိပွစိလုပ်တယ်ပေါ့။ သူဆိုလိုချင်တာက ပွမ်တယ်ဆိုတာ ရွတာ.. ကဲတာတဲ့.. ဟဟဟ xD သူက မန္တလေးသူ။ မန္တလေးမှာ ပွမ်တယ်ဆိုတာ ကဲတာတဲ့။ ကန်ဒီရော ကန်ဒီ့ညီမရော နားမလည်ဘူး။ ဒီမှာ ကန်ဒီပေါင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအများစုက နယ်ကများတယ်လေ။ သူတို့ဟာ သူတို့တော့ နားလည်နေတာပဲ :) ဒါနဲ့ ပြောနေတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ? အင်း.. ကျူတယ် (အဲ့လို စာလုံးပေါင်းတာလား @_@).. အီတယ်ဆိုတာကို ကန်ဒီနားလည်ထားတာက တကယ်မဟုတ်ပဲ တကယ်မချစ်ဘဲနဲ့ ရည်းစားမကျ ဘာမကျစကားတွေပြော ဖုန်းတွေပြော ချက်တင်တွေထိုင်တာပါ။ ပထမဆုံး ကန်ဒီမေးချင်တာက ကျူတာကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါသလား? ကန်ဒီကတော့ တော်တော်မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တဖက်လူက ကျူနေပေမယ့် နောက်လူက တကယ်ကြီးထင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? တဖက်သားနစ်နာပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့သူ့ကိုအချိန်ပေးနေမှာလဲ။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူမို့ ကြိုးစားနေတာကို ကန်ဒီမဆိုလိုပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ ကျူတာတော်တော်ရေပန်းစားပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုကျူနေရတာကိုတောင်ဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတဲ့သူတွေကန်ဒီ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးတွေ့နေရလို့ပါ။ ယောက်ျားလေးတွေလည်း ကျူပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေလည်း ကျူပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ခံရတာက ကျူတာကိုမသိတဲ့ တဖက်လူတွေပါ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တဖက်လူက ရင်ထဲကမပါဘဲ ပါးစပ်ထဲရှိရာပြောနေတဲ့စကားတွေကို နောက်လူက တကယ်ကြီးတွေထင်ပြီး အပျော်ကြီးပျော်နေရအောင် တန်လို့လား? အဲတော့ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ကိုကျူနေမှန်း သိဖို့ပါ။ မသိပဲ သူပြောတာတွေယုံစားမိရင်တော့ သွားပြီပဲ။ Chat room တွေကတော့ ကျူတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက ကျက်စားရာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ ကျူတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒါတွေပြောနေလို့ ကန်ဒီကို ဆရာကြီးလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျူလို့ကျူမှန်း ချက်ချင်းမသိတဲ့အထဲမှာ ကန်ဒီလည်းပါခဲ့တယ်။ ကန်ဒီ့ကို အင်တာနက်က ပထမဆုံးကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပြလိုက်တာ အဲ့ဒီကျူတာတွေပါ။ ကန်ဒီတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်လောက်က အမေက အိမ်မှာအင်တာနက်ဆင်ပေးတယ်။ ဆင်ပေးတဲ့သူကလည်း MIRC chat room လား ဘာလား အဲ့ဒါတွေထည့်ပေးသွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာတင် အင်တာနက်မှာ ဒီလိုတွေ ရှိပါလားဆိုတာ ကန်ဒီကောင်းကောင်းကြီးနားလည်လိုက်တယ်။ ကန်ဒီ သင်ခန်းစာအများကြီးရလိုက်တယ်။ ကန်ဒီစိတ်ရင်းနဲ့ ခင်သလောက် လူတွေကကန်ဒီ့ကို တကယ်ခင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။ တချို့ကအကောင့် ၂ခု နာမည် ၂ခုနဲ့ လူကိုလာချက်ပြီး အရူးလုပ်နေကြတယ်။ အဲ့အချိန်ကစပြီး ဘယ်တော့မှ Public chat room မ၀င်တော့ဘူး။ Gtalk မှာလည်း သိမယ်ထင်တဲ့သူပဲ လက်ခံတယ်။ ဖေ့ဘွတ်မှာလည်း အဲ့လိုပဲ။ ဒီနောက်ပိုင်း Gtalk မှာလာအပ်တဲ့ သူတချို့ကို ကန်ဒီ့ဆီ လာလာလည်နေတဲ့သူတွေများ ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး လက်ခံဖြစ်တယ်။ ဟိုနေ့ကပဲ စကားလာပြောတော့ ကောင်းကောင်းပြန်ပြောတာပေါ့။ နောက်တော့ သူကမေးတယ်။ Boy or Girl တဲ့... တော်တော်ရီချင်သွားတယ်။ candy ဆိုတာ Boy ဖြစ်နိုင်လား.. khine ဆိုတာကလည်း မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့များတာပဲ.. ကန်ဒီလည်း အမြင်ကတ်လို့ Boy လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး စကားလာမပြောတော့ဘူး။ မျိုးတူရင် တွန်းကန်တဲ့သဘောရှိတယ်ထင်တယ်နော် ဟဟဟ... ရီတော့ရီရတယ်။ ကိုယ်ချက်တဲ့သူရဲ့ နာမည်တောင် မကြည့်ဘူးလား မသိဘူး။
ကန်ဒီက လူတိုင်းကို လေးလေးနက်နက် ခင်သလောက် သူများက ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်ကြတာများတယ်။ ကန်ဒီ့ကို လာကျူတာတော့ ရှားပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သိတဲ့သူလောက် လက်ခံတာဆိုတော့။ လာလာကျူကြလို့ စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ညည်းတယ်။ ညည်းတာလား ကြွားတာလားတော့ မသိဘူး (အမှန်တွေ ပြောမိရင်သည်းခံပါ :P)။ အဲ့လိုအကျူမခံချင်တာများ လွယ်လွန်းလို့.. Profile picture တွေကို Couple ပုံတင်လိုက်.. ဒါမှမဟုတ် Cartoon ပုံတင်လိုက်.. လို့ အကြံပေးလိုက်တယ်။ ဒီလိုကျတော့လည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ နားကိုမလည်ဘူး >.< အင်တာနက်မှာကျူတာကို ဒီမှာတင်ရပ်ပြီး အပြင်လောကမှာ ကျူတာကိုနည်းနည်းပြောရအောင်။ အပြင်လောကမှာလည်း တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်သူရှိတယ်။ ချစ်သူနဲ့ ခဏခွဲနေရတဲ့ အနေအထားပေါ့။ အဲ့ဒီလူက အဲဒီ့ကောင်မလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူငယ်ချင်းပဲပေါ့။ ဖေ့ဘွတ်မှာလာအပ်တော့ ကောင်မလေးက Accept လိုက်တယ်။ ချစ်သူရှိတယ်လားမေးတော့ ကောင်မလေးက အင်း.. ရှိတယ်ပေါ့။ နောက်တော့ အဲ့ဒီလူက ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားပြောတယ်။ ကန်ဒီ ဒါကိုမှားတယ် မဆိုလိုပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ချစ်တာကိုလည်း ဖွင့်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကောင်မလေးချစ်တာ မချစ်တာ လက်မခံနိုင်တာ သူ့အပိုင်းပဲလေ။ ကောင်မလေးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. သူ့မှာ ချစ်သူရှိပါတယ်ပြောတော့ အဲ့လူက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ကောင်မလေးကို ဘာပြောတယ်ထင်လဲ.. ကောင်မလေးချစ်သူမရှိတဲ့အချိန်လေးပဲ သူ့နားနေပေးပါတဲ့။ ကောင်မလေးချစ်သူပြန်လာရင် သူထွက်သွားပေးမယ်တဲ့။ ဒါကောင်မလေးကို အထင်သေးတာပဲ။ ကောင်မလေးအဆင့်က ဘယ်ရောက်သွားမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်တော့။ အဲ့အချိန်ကစပြီး ကောင်မလေးလည်း အဲ့ဒီလူကို သိပ်မခေါ်မပြောတော့ဘူး။ နောက်ပိုင်း ကောင်မလေးကြားရတာက အဲ့လူက တော်တော်ရှုပ်ဆိုပဲ။ မိန်းကလေးတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်တွဲတယ်တဲ့။ ကန်ဒီ ပြောချင်တာက အဲ့ကောင်မလေးနေရာမှာ တခြားရည်းစားမရှိတဲ့ မိန်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်... သူပြောတာတွေထဲမှာ အရည်ပျော်ပြီး သူနဲ့ကြိုက်မိမယ်ဆိုရင် မတွေးရဲစရာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကိုယ့်အပေါ်အလေးထားတာနဲ့ မထားတာတော့ သိသာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေကလည်း မကြိုက်နိုင်ရင် မကြိုက်နိုင်ဘူး တည့်တည့်မပြောပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး အီနေတဲ့ကိစ္စပါ။ အဲ့လိုလုပ်တာ သူများကို ဒုက္ခပေးရာရောက်ပါတယ်။ မချစ်နိုင်ရင် မချစ်နိုင်ဘူးပြောပါ။ သူလည်း အချိန်မကုန်ပါဘူး။ ကိုယ်လည်း အချိန်မကုန်ပါဘူး။ အဲ့လိုအီတဲ့လူတွေ အများကြီးနဲ့ လုံးလည်လိုက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲလိုတွေလုပ်နေတော့ ကိုယ်ပဲသိက္ခာကျတာပါ။ လူပြောစရာဖြစ်တာပါ။ ဒီပိုစ့်ရေးလို့များ ကန်ဒီ့ကိုမုန်းကြမလား? ဒါကန်ဒီ့အမြင်သက်သက်ပါ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားရင် အားလုံးပဲ အမိုက်အမဲလေးကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ^_~ Posted by Candy
Posted by shwesin at 2:24 AM2comments:
ပျားရည်ရဲ့ချိုမြမှုကသဘာဝအချို ဖြစ်တာကြောင့်သကြားအစားထိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ပျားရည်ဟာအရသာရှိရုံသာမကအနာကောင်း ကောင်းကျက်စေတဲ့ အစွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ပျားရည်မှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ အမိုင်နိုအက်စစ်၊ အင်ဇိုင်းတွေနဲ့ ဖိုင်တိုနျူး ထရီးရန့်တွေ ပါဝင်နေတဲ့အပြင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် စွမ်းအင်ကောင်းကောင်း ရရှိစေပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်း အား စနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၁) ပျားရည်ဟာ အားရှိစေတဲ့ သဘာဝအရာဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်ကို ချက်ချင်းရရှိစေပါတယ်။ ပျားရည်မှာပါတဲ့ ကာဗိုလ်ဟိုက် ဒရိတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က သန်စွမ်းမှုရရှိစေပါတယ်။ ပျားရည်မှာပါတဲ့ ကာဗိုလ်ဟိုက်ဒရိတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က သန်စွမ်း မှုရရှိပြီး ကြွက်သားတောင့်တင်း ညောင်းညာမှု လျော့ကျစေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မူးဝေတာမျိုးကိုလည်းသက်သာစေ ပါတယ်။
(၅) ပျားရည်နဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှုန့်တို့ကို ရောမွှေပြီး ဆံပင်သားပေါ် လိမ်းပေးရင် ဆံပင်ကျွတ်တာကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ (၆) ပျားရည်နဲ့ သံပရာရည်တို့ကို ရောပြီး ပုံမှန်သောက်ရင် အဆီပိုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းရေးမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ (၇) ပျားရည်ကို နှင်းခူလို အရေပြားယားနာတွေပေါ် လိမ်းပေးရင် သက်သာစေပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့နေရင် ပျားရည်ကို အကောင်းဆုံးအစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည် လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းကို ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ ရောကာ မျက်နှာပေါ်ကို ညင်ညင်သာသာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ နေ့စဉ်မှန်မှန် သုတ်လိမ်းပေးပါက တစ်ပတ်အတွင်းမှာ နူးညံ့ပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ သင့်အသားအရေက ဝက်ခြံပေါက်လွယ်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ရင်တောင်မှ ပျားရည်ကိုလိမ်းပေးရင် ဝက်ခြံတွေရဲ့ အနာကျက်စေတဲ့ အာနိသင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ (၈) နံနက်တိုင်း ပျားရည် လက်ဖက်စားဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ ကြက်သီးနွေးရေကို ရောပြီးသောက်ပေးရင် ဝမ်းမှန်စေပြီး အစာခြေစနစ် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်တစ်နှစ်အောက် ကလေးတွေကိုပျားရည် လုံးဝ မတိုက်သင့်ပါ။ ပျားရည်မှာ သဘာဝအတိုင်း botulinum endospores ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ပါဝင်တာကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က ဒီဘက်တီးရီးယား ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့အထိ အလုံအလောက် မဖွံ့ဖြိုးသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးရဲ့ အူကို ပိုးဝင်ကူးစက်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Ref: Good Health Copyright © 2009 MyanmarNewsZone.com.
Posted by shwesin at 7:42 PM No comments:
အသီးမှာသရက်ဆိုတဲ့အတိုင်း အသားများပြီး အရသာအလွန်ကောင်းမွန်သည့်သရက်သီး၏အင်္ဂလိပ်အမည်မှာMangoဖြစ်ပြီး၊ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ Mangifera L ဟုခေါ်တွင်ပြီး မျိုးရင့် Anacardiaceae ထဲတွင် ပါဝင်ပါတယ်။
သရက်သီးသည် အပူပိုင်းဒေသမှာ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည့် အသီးမျိုးဖြစ်ပြီး မျိုးစိတ်ပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ ရှိပါတယ်။ သရက်သီးသည် တောင်အာရှနှင့်အရှေ့တောင်အာရှဒေသများဖြစ်သည့်မြန်မာ၊အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစရှိတဲ့နိုင်ငံများတွင် မူလအစ ဖြစ်ထွန်းပြီး အမေရိကန် အလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းနှင့် အာရေဘီယံ၊ ပင်နီဆူလာ တို့တွင်လည်းစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။
သရက်သီးမှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကတော့ ပရိုတင်း၊ ၀ ဒဿမ ၈၄ ဂရမ် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ၂၈ ဂရမ်၊ အဆီ ၀ဒဿမ ၄၅ ဂရမ်၊ အမျှင် ၃ ဂရမ် ဗီတာမင်အေ ၆၄၂၅ အိုင်ယူ၊ ဗီတာမင်စီ ၄၅ ဒဿမ ၇ မီလီဂရမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ် ၁၈ မီလီဂရမ်၊ ပိုတက်စီယမ် ၃၀၀ မီလီဂရမ်၊ ကယ်လ်စီယမ် ၂၀ ဂရမ်နဲ့ အနည်းလို အာဟာဓာတ်များ ဖြစ်သည့် မဂ္ဂနိစ်၊ ဆီလီနီယမ်၊ အွန်ယွန်၊ ဆိုဒီယမ်နဲ့ ဖော့ဖရပ်စ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
သရက်သီးမှာ အလွယ်တကူ ချေဖျက်နိုင်သည့် အမျှင်ဓာတ် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး တစ်နေ့တစ်လုံး မှန်မှန်စားသုံးပေးမည်ဆိုပါ ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည် နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါအချို့ ဖြစ်ပွားစနိုင်မှုနှင် သွေးအတွင်းရှိကိုလက်စထရောကိုလည်း ကျဆင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သရက်သီးဟာအနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံရုံသာမကဗီတာမင်၊သတ္တုဓါတ်၊ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတို့ ကြွယ်ဝတဲ့အပြင်အင်ဇိုင်းများပါဝင်တဲ့အတွက်အစာအိမ်မှာအစာချေဖျက်ခြင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အတွက်အစာစားသုံး နေစဉ်နဲ့အစာစားပြီးတိုင်း သရက်သီးကို နေ့စဉ်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
သရက်သီးမှာကယ်လိုရီနဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုသရက် သီးမှာဖိနိုလစ်ကွန်ပေါင်းပါဝင်တဲ့ အတွက်လည်း အရွယ်တင်နုပျိုစေသည့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနှင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင် မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်း ပါဝင်တယ်လုိ့ဆိုပါတယ်။
သရက်သီးဟာသံဓာတ်မြင့်မားတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့် သွေးအားနည်းရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ကောင်းသလိုအရေပြားဆဲလ်များမှာ ချေးများပိတ်ဆို့နေခြင်းကိုသရက်သီးက အကောင်းမွန်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ သရက်သီးမှာဗီတာမင်အီးပါဝင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုကောင်းမွန်စွာအထောက်အကူပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် သရက်သီး၏အရောင်ဟာ အဝါရောင် အနည်းငယ်သာ ပါဝင်ပြီး မှည့်သည့်အခါအနံ့အလွန်မွှေးတဲ့အ တွက် စားသုံးရာမှာလည်း အရသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွှတ်တဲ့ သရက်သီးကို စားသုံးကြဖို့ ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ Ref: Commerce credit By myanmarnewszone.
Posted by shwesin at 3:51 AM No comments:
ပိန္နဲသီးထဲမှာ potassium ပါဝင်မှူကြောင့် body blood pressure ကို ကောင်းကောင်းထိန်းပေးထားပါတယ် ရုတ်တရက် သွေးအား တက်ချင်းကျချင်း ကောင်းကောင်း ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်...
ပိန္နဲသီးအမြစ်မှ ထုတ်ထားတဲ့ အဆီဟာ ၀မ်းလျှောဝမ်းကိုက်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်... ပိန္နဲသီးအမြစ်ဟာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုလည်းပျောက်ကင်းစေနိူင်ပါတယ်... ပိန္နဲသီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ isoflavones,antioxidants,and phytonutrients ဓါတ်တွေဟာ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိူင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေရှိပါတယ်..
ပိန္နဲသီးဟာ ဆိုရင် ခန္မာကိုယ်တွင်းမှာပေါက်တက်တဲ့ ဖက်ခွက်နာပြည်တည်နာစတဲ့ရောဂါ တွေနဲ့ အစာမကျေဖြစ်ချင်းကို လည်းကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးနိူင်ပါတယ်.... ဒါ့အပြင် ပိန္နဲသီးဟာ အရွှယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ေ၇ာ်ခြင်းကိုလည်း ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးပါ။ ခန္မာ ကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးမှူမှ ကာကွယ်ပေးပီးအသားအရေဟာ နုပျိူပီး အရိုးတွေ ကိုအလွယ်တကူ ကျိူးချင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်... ပိန္နဲသီးဟာ ခန္မာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့protein(အသားဓါတ်).carbohydrates(ကစီဓါတ်). minerals(သတ္တုဓါတ်) တို့ကိုလည်း အမြောက်အမြားထောက်ပံ့ပေးပါတယ်....
ပိန္နဲသီးဟာ စိတ်ဖိစီးမှူ .စိတ်လှူပ်ရှားမှူတို့ကိုလည်း ကောင်းကောင်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်(စိတ်ကျေနပ်မှူရစေပါတယ်) ပိန္နဲသီးပါဝင်တဲ့ calories နဲ့ fat တွေဟာ အလွန်နည်းတဲ့ အတွက်ခန္မာ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချချင်သူတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်... ပိန္နဲသီး ကိုပုံမှန်စားသုံးချင်းဖြင့် ၀မ်းချူပ်ခြင်းဝေဒနာကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်..
နောက်ဆုံးတစ်ခု အနေနဲ့.... ပိန္နဲသီးရဲ့ အမြစ် ဟာ အရေ ပြားပေါ်မှာဖြစ်တက်တဲ့ရောဂါ တော်တော်များများကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. ပိန္နဲသီး ထဲမှာပါတဲ့ vitamin ဟာ မျက်လုံးအတွက်အလွန်ကောင်းစေပါတယ်...
credit bySin Thi Aye lwin
Posted by shwesin at 3:11 AM No comments:
ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူတို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ မွေးလာမယ့်မိမိတို့ကလေးရဲ့ပုံကိုတွေ.ချင်ပါသလား၊ ဒီကို သွားလိုက်ပါ....http://www.makemebabies.com/ အရင်ဆုံး Browse ကနေမိမိပုံကိုတင်လိုက်ပါ ပြီးရင် go ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်မိမိပုံကို edit လုပ်ပြီး next ကိုပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်upload Partner's Photo ဆိုတာကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ Browse ကနေမိမိ ချစ်သူပုံကိုထည့်လိုက်ပါ next ပေးပါြ့ပီးရင် ကောင်လေးပုံပေါ်စေချင်တာလား ကောင်မလေးပုံပေါ်စေချင်တာလား ဆိုတာရွေးပါ Baby name မှာနာမည်ထည့်ပါ proceed ကိုပေးလိုက်ပါ အဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ baby ပုံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အနီးစပ်ဆုံးတူတယ်လို့တော့ညွန်းကျတာပဲ.... တူတယ်ဆိုရင်လဲမွေးလာရင်ပြောပေါ.နော်. စမ်းကြည်.လိုက်ပါ။ ကိုငြိမ်းချမ်း ဘာလော့ကနေ ပြန်လည်တင်ပြပေးတာပါ။ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။ အမျိုးအစား: နည်းပညာ ထိုလင့်တွင်အပြည့်အစုံဖတ်ပါ: http://www.mm-flashsongs.com/forum/topics/5202681:Topic:308434#ixzz1qP1ZvtOP
Posted by shwesin at 2:32 AM No comments:
ခန္ဓာသွယ်လျ အဆီနှင့် ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်ကျလိုလျှင် ခုနစ်ရက်စားသောက်နည်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ အညွှန်းအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာပါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အညစ်အကြေးများ သန့်စင်သွားပါလိမ့်မည်။ ပေါ့ပါးကျန်းမာခြင်းကိုလည်း ခံစားရပါလိမ့်မည်။ ဤအစီအစဉ်ကို သင်စားနိုင်သလောက်အချိန်ထိ ထပ်ခါထပ်ခါကြာရှည်စွာ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဤစားသုံးနည်းသည် အဆီများကို လျှင်မြန်စွာ ခြေဖျက်နိုင်သည့်နည်းဖြစ်ပြီး အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်မှာ ကယ်လိုရီများကို သင်စားသုံးသည့် ပမာဏထက် ပို၍ ခြေဖျက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ (ရုံးဝန်ထမ်းများ) လည်း ဂျိုင့်ဖြင့်သယ်ယူ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဤစားသုံးနည်းကို စားသုံးနေချိန်အတွင်း ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ အဆီများကိုဖယ်ရှားနေသည့်ကာလ ဖြစ်သောကြောင့် အရက်၊ ယမကာသောက်ခြင်း မသင့်လျှော်ပါ။ အစီအစဉ်မစမှီနှင့် စတင်နေချိန်နေ့ရက်များအတွင်း မိမိ၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို နေ့စဉ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ အဆီကျ ဟင်းရည် ချက်နည်း ကြက်သွန်နီဥကြီး ၆ လုံး ငရုတ်သီးပွ(အစိမ်း) ၂ တောင့် ခရမ်းချဉ်သီး ၆ လုံး တရုတ်နံနံ သင့်ရုံ ဂေါ်ဖီထုပ် ၁ ထုပ် Lipton Onion Soup Mix (သို့မဟုတ်) ဟင်းရည်အချိုခဲ (Knorr) ၁/၂ ခဲ ဂေါ်ဖီက၁ထုပ်တောင်မှနော်အတော်သောက်ရမယ် :P
အရသာရှိစေရန် ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ မဆလာ၊ အမွှေးအကြိုင်များကို လိုသလိုထည့်နိုင်ပါသည်။ (ဆာလျှင် ဆာသလို သောက်နိုင်အောင် ကြိုချက်ထားပါ။) အစီအစဉ် စ ပါမည် ပထမနေ့ အဆီကျဟင်းရည်နှင့် (ငှက်ပျောသီးမှအပ) သစ်သီးများအားလုံး စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အဆီကျဟင်းရည်ကို ဆာလျှင် ဆာသလို အချိန်မရွေး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယနေ့ အစိမ်းဖြစ်စေ၊ ကျက်ပြီးသားဖြစ်စေ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဗိုက်ပြည့်သည်အထိ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အစိမ်းရောင်ဟင်းရွက်ဖြစ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ (ဥပမာ- ကန်စွန်းရွက်၊ ဟင်းနုနွယ်) အဆီကျဟင်းရည်ဖြင့် တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဟင်းရည်ကို ကြိုက်သလောက် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
တတိယနေ့ ပထမနေ့အစားအစာနှင့် ဒုတိယနေ့အစားအစာများကို ရော၍ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အဆီကျဟင်းရည်၊ သစ်သီးနှင့် ဟင်းရွက်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ စတုတ္ထနေ့ ငှက်ပျောသီးနှင့် အဆီထုတ်ထားသောနွားနို့၊ အဆီကျဟင်းရည်တို့ကို စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ငှက်ပျောသီးကို (၈)လုံးအထိ စားနိုင်ပြီး၊ အဆီထုတ်ထားသောနွားနို့ကို ကြိုက်သလောက် သောက်နိုင်ပါသည်။
ပဉ္စမနေ့ (၁၈)ကျပ်သားမှ (၃၄)ကျပ်သားခန့်ရှိသည့် အမဲသားကို လတ်ဆတ်သော ခရမ်းချဉ်သီး (၆)လုံးလောက်နှင့် တွဲဖက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ Uric Acid ကိုဆေးချရန်အတွက် အနည်းဆုံး ရေ(၈)ခွက်လောက် သောက်ပေးပါ။ အဆီကျဟင်းရည်ကိုလဲ အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ သောက်ဖြစ်အောင် သောက်ပေးဖို့လိုပါသည်။
အမဲသား မစားသူများ အရေခွံမပါသော ကြက်သားကို ပြုတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ကင်၍သော်လည်းကောင်း သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဆဌမနေ့ ဒီနေ့အတွက်တော့ သင်ဆန္ဒရှိသလောက် အမဲသား(သို့မဟုတ်)ကြက်သားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ရောပြီး စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အရွယ်တော် အသားတုံး(၆)တုံးလောက်အထိကို အရွက်ပါသည့်ဟင်းနှင့် တွဲပြီး စားနိုင်ပါသည်။ အဆီကျဟင်းရည်ကို အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ သောက်ဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပြီး သောက်ပေးပါ။
သတ္တမနေ့ ဆန်လုံးညို၊ အချိုမပါသော သစ်သီးရည်များနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၊ သုံးမျိုးစလုံးကို ကြိုက်သလောက် စားနိုင်ပါသည်။ အဆီကျဟင်းရည်ကိုလည်း မမေ့မလျော့ အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ သုံးဆောင်ပေးပါ။
ခုနစ်ရက်ပြည့်ပြီး သင့်ဘက်ကလည်း အညွှန်းအတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာခဲ့လျှင် (၁၀)ပေါင်မှ (၁၇)ပေါင်အထိ အလေးချိန်လျော့ကျပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ (၁၇)ပေါင်ထက်ပိုကျနေခဲ့လျှင် ဤစားနည်းကို နောက်တစ်ခါ ပြန်မစခင် အနည်းဆုံး (၂/၃)ရက်လောက်နားထားလိုက်ပါ။
အမှန်တကယ်ပင် အဆီကျ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသည်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပါသောကြောင့် လက်တို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် Wellness Magazine မှ U.O.P ရေးသားသည်ကို ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by shwesin at 11:27 PM No comments: